Cunto Karis | GURIGA HAWEENKA
Home » Cunto Karis
Admin 10 days ago	Cunto Karis, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Sudee ugu sahlan aad u noqon kartit qof ku taqasuusay cuno karintA HADII AD DOONAYSID HADABA HOOS KA DAAWO.
Muuqalakaan,waxa aad ku daawan kartaa sida ugu fudud ee loo sameen karo digaaga
MUUQAAL: Daawo sida loosameyo burjikada eynu u isticmalno cuna karinta
dad badan ayaa ka war qabin halka ay ka timaado burjikada aynu rashiinka ku karsano,iyo sidoo kale habka loo sameeyo.
Ma ogtahay inta ukumood ee aad cuni kartid maalin kasta? Nafaqo-yaqaanku wuxuu ka jawaabayaa su’aalaha ugu badan ee la is waydiiyo – iyo jawaabaheeda oo noqonaayo kuwo ku qancinaayo.
Admin 11 days ago	Cunto Karis, Heath, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Maalin kasta Austrian nafaqeyste Susie Burrell ayaa su’aalo isku mid ah weydiistay marba marka ka dambaysa:
‘Miyaa tahay inaan cuno rooti weligiis miisaan culus’? ‘,’ Miyuu sonkorta miro ku waxyeeleeyaa cuntadayda? ‘,’ Su’aal ma u tahay mid caafimaad qaba sida qof walba sheegto? ‘
Sidaas Susie ayaa go’aamisay wakhtigii ay ka jawaabtay su’aalaha ugu badan ee ay ka qabaan sheeyada iyo nafaqeeyayaasha kale oo maalin kasta la waydiiyo – jawaabtana way kugu yaabi kartaa.
Oprah Winfrey ayaa diiday in ay ka bixiso rootigeeda jecel, waana sidaas oo kale.
Susie ayaa shaaca ka qaaday in kibistii oo dhan aysan keenin miisaan culus, furaha ayaa ah in la qaado midka saxda ah si uu kuugu hayo farxad iyo buuxa.
‘Koobab ballaadhan, rootiga Turkiga, weelasha qarxa ama alaabta caddaanka ah ee aan inta badan isticmaalno makhaayadaha ayaa si sahlan u keeni kara caraf iyo kaloori in kabadan haddii aanan ka taxadarayn,’ ayay ku qortay blogkeeda.
Taa bedelkeeda Susie wuxuu ku taliney in uu ku dhajiyo kab ama laba xabo cufan ama rooti Sourdough si loo hubiyo in aad qaadato karbohidratka iyo kaloorigaaga weli wali jeeg.
Miro ayaa sidoo kale noqon kara mid aad u weyn oo ku saabsan cuntadaada, ilaa iyo inta aad haysato nooca saxda ah.
Tani macnaheedu maaha inaad ka soo baxdo canabka iyo qaraha. Miro cusub ayaa ka buuxsameysa sonkorta dabiiciga ah oo aan si xun u waxyeeleynin cuntadaada haddii aad ku dhajiso hal ama laba jeer maalintii, sida laga soo xigtay Susie.
Hase yeeshee, looma odhan karo miro la miiray ama la qalajiyey. Kuwani waxay ku jiraan sonkor, taas oo Susie ku talinayso in la yareeyo shan qaado oo maalintii ah.
‘Waxaad si fudud u heli doontaa adigoo isticmaalaya suugo ama laba jeer maalintii oo dhan, iyo malaha wax yar oo ku jira baraf fudud, caano, or quraac, “ayay ku qortay.
Susie waxay ku talineysaa in la baaro saxarada si loo hubiyo in waxa aad iibsaneyso ay ka yar tahay shan garaam oo sonkor ah halkii adeega, ama in ka yar 10gram 100 karoon.
Yoghurt waa cunno fudud oo nafaqo leh oo mararka qaarkood ku jiri kara sonkorta.
Susie wuxuu kugula talinayaa inuu kudhaqaaqo geedka Giriigga, gaar ahaan kuwa leh tirooyinka borotiinka sare.
Sababtoo ah qoyaannada dhirta badanaa waxay leeyihiin laba ama seddex xabbadood oo cabir ah marka la barbardhigo dhadhanka caadiga ah, Susie mar kale waxay ku talinaysaa isticmaalka miro cusub.
Qaabka iswiidhishka, ama quark ayaa sidoo kale aad u wanaagsan nafaqada haddii aad jeceshahay inaad dhadhamiso, ayay ku dartay.
Warbixinnadii la soo dhaafay ee ku saabsan dufanka cufan ee la kariyey ayaa dad badani dib ugu furtay ukumo quraac ah, laakiin Susie ayaa halkan ku jirta si ay u xakameyso walaacyadaas.
‘Eggs waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu nafaqada badan,’ ayay tiri. ‘Iyada oo qayb ka ah cunto isku dheelitiran, qaadashada ukun ama laba maalin maaliyadeed ma saameyn doonto miisaankaaga ama heerarka kolestaroolka.
Waxa kale oo ay soo jeedinaysaa in ay isbeddel weyn ku yeelato Kalashiyada California ee Sashimi iyo Suudi oo la sameeyey bariis bunni ah iyo sidoo kale edamame iyo salad seaweed +7
Waxa kale oo ay soo jeedinaysaa in ay ka saarto Kaluumaysiga weyn ee California ee Sashimi iyo Suudi la sameeyey bariiska buniga ah iyo sidoo kale edamame iyo saladeed seaweed
Hase yeeshee, markii suudi ay u muuqato mid casho ah oo caafimaad leh, dhowr saxan oo ka mid ah makhaayadda Japan ee aad u jeceshahay waxay ku jiraan carbohydrates.
‘Laba California oo waaweyn oo laga sameeyey bariis maaha mid nafaqo leh sida aad u maleyn karto, oo ka kooban caraf badan oo ka badan borotiinka ama qudaarta nafaqada leh, “ayuu yiri Susie.
Nafaqeeyaha ayaa kugula talinaya in uu kudhicisto sashimi, edamame, salad seereed, iyo cunista hal ama laba lakab oo bariis ah.
Marka ay timaado go’aaminta saliida lagu kariyo jikada, Susie wuxuu sheegay in saliid dahab ah oo bikrad ah oo bikrad ah ay tahay guuleyste cad.
‘Ka soo horjeeda aaminaadda caanka ah waxaad ku karsan kartaa saliida saytuunka,’ ayay tiri. ‘Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah saliidda wax lagu kariyo ee ugu xasilan si loo kariyo.’
Saliida sayniska waxaa sidoo kale lagu iibiyaa antioxidants iyo Vitamin E. Cuntada Bariiska, oo saliidda saytuunku ay qayb weyn ka ciyaaraan, ayaa sidoo kale lala xiriiriyay khatarta cudurka wadnaha.
Susie wuxuu kugula talinayaa in uu u hoggaansamo cadaynta cunto karinta ee saliidda qumbaha, taas oo ay sheegtay in uu leeyahay dufan badan oo cufan ah oo aan ‘bixineynin faa’iidooyinka antioxidants ama nafaqo dheeraad ah’.
Admin 12 days ago	Cunto Karis, Heath, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Admin 12 days ago	Cunto Karis, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
VIDEO:Ansalaato cajiib ah & malawax digir ka sameeysan !!
Admin July 12, 2017	Cunto Karis, QOYSKA IYO NOLOSHA
Ansalaato cajiib ah & malawax digir ka sameeysan!!
VIDEO:Maraq Afurka Ku Fiican Oo Laga Sameynayo Misir iyo Khudaar Kala Duwan | Umm Cafiifah
Admin June 1, 2017	Cunto Karis, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Maraq Afurka Ku Fiican Oo Laga Sameynayo Misir iyo Khudaar Kala Duwan | Umm Cafiifah